विभागमा सेनिटाईजर उद्योगको फाईल किन अड्कियो ? – Janacharcha.com
» आर्थिक अंक: 3197
विभागमा सेनिटाईजर उद्योगको फाईल किन अड्कियो ?
Janacharcha.com शनिबार, साउन ३१, २०७७ मा प्रकाशित
सेनिटाईजर उत्पादन र विक्रिमा अन्तरःशुल्क र भ्याट छुट दिन स्वदेशी सेनिटाईजर उत्पादकहरुले सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका सेनिटाईजर उद्योगलाई सरकारले कस्मेटिक सरह (लग्जुरी बस्तु)को रुपमा सुचिकरण गरी बढी राजस्व असुल गरिरहेको उत्पादकहरुको गुनासो छ ।
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको उद्योगहरुले सेनिटाईजर बनाउने स्प्रीट खरिद गर्दा प्रति लिटर ६० देखि ६५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । र सेनिटाईजर बनाएर बेच्दा समेत १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर विभागमा दर्ता भएको उद्योेगहरुको हकमा भने अन्तःशुल्क र भ्याट दुवै छुट गरिएको छ । एउटै प्रकृति समान बनाउने उद्योगहरु, कसैसँग कम र कसैसँग बढी राजस्व संकलन गर्नु राज्यको विवेदकारी निति भएको विभागमा दर्ता नभएका उत्पादकहरुको बुझाई छ ।
दर्ता फाईल पेन्डिङमा
औषधी व्यवस्था विभागमा हाल ३ दर्जन भन्दा बढी सेनिटाईजर उद्योगको दर्ता फाईल पेन्डिङमा छ । दर्ताको लागि आवेदन दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि अनुमति नपाएको भन्दै उद्योगीहरुले विभागको काम प्रति अनुसन्तिुष्टी जनाइरहेका छन् ।
विभागले नँया कम्पनीहरुलाई दर्ता नदिएको कारण पहिलानै दर्ता भएका औैषधी बनाउने फर्मासुईटिकलसँग बाहेक कसैसँग पनि विभागको लाईसन्स छैन् । सोही कारण सेनिटाईजरको उत्पादन र विक्रिमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भ्याटमा पुराना फर्मासुईटिकलले मात्र छुट पाईरहेका छन् । दर्ताको लागी आवेदन दिएका एक सेनिटाईजर उत्पादक भन्छन् “काम हुदैछ–हुदैछ भन्दै विभागको कर्मचारीहरुले टारि मात्र रहेको छ, निवेदन दिएको पनि चार मिहना पुगीसक्यो दर्ता किहिलेसम्म हुने हो केहि टुंगो छैन ”
कर्मचारीसँग मिलेमतो, बजारमा कार्टिलिङ
स्रोतका अनुसार विभागमा दर्ता रहेका फर्मासुईटिकलहरुले विभागको कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी नयाँ दर्ताको कामलाई अघि बढ्न दिएका छैनन् । नयाँलाई विभागमा दर्ता नदिएपछि, उनीहरुले अन्तःशुल्क र भ्याट तिरेरै सेनिटाईजरको उत्पादन गरिरहेका छन् । तर त्यसरी सेनिटाईजर उत्पादन गर्दा प्रति लिटर ९० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च बढ्ने उत्पादक बताउँछन् ।
उता विभागमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले अन्तःशुल्क र भ्याट् नतिर्नु पर्ने भएका कारण उत्पादनमा प्रति लिटर ९० रुपैयाँसम्म सस्तो पर्दै आएको छ । तर फार्मासुईटिकलहरुले सस्तोमा सेनिटाइजर उत्पादन गरेपनि मुल्य भने घटाएका छैनन् । स्रोतका अनुसार फार्मासुईटिकलहरुले ५ लिटरको सानिटाईजर १२ सय रुपैयासम्म बेच्न पोसाउछ । तर उनीहरुले एकआपसमा कार्टिलिङ गरेर बजारमा ५ लिटरको सेनिटाईजर १५ सयभन्दा घटिमा नबेचिरहेको स्रोत दावी गर्दछ ।
नितिमा परिर्वतन ल्याए सेनिटाईजरको मुल्य आधा घट्ने
सरकारले नितिमा परिवर्तन ल्याए हाल बजारमा पाईरहेको सेनिटाईजरको मुल्य ५० प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने उद्योगीहरुको तर्क छ । सवै सेनिटाईजर उद्योगहरुलाई अन्तःशुल्क र भ्याटमा छुट दिए सेनिटाईजर कम्पनीहरु प्रतिश्प्रर्धामा आउने र प्रतिश्प्रर्धाले स्वतः समानको मुल्य घटाईदिने उत्पादकहरुको बुझाई छ । अन्तःशुल्क र भ्याटमा छुट दिए आफ्नो सेनिटाईजरको मुल्य आधा घटाईदिने केहि उत्पादकहरुले ठोकुवा समेत गरेका छन् ।